Amboary ny olana amin'ny Wifi (Broadcom 43xx) amin'ny ubuntu aorian'ny fanavaozana | Avy amin'ny Linux
MRGERSON | | Fitsinjarana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Misy olona manana olana amin'izany Ubuntu aorian'ny fanavaozana ny rafitra (Amin'izany dia miresaka momba ny: - |) aho. Ny mitranga dia mametraka ianao Ubuntu ary ny tonga lafatra rehetra Wifi miasa tsara fa rehefa manavao ny rafitra ianao ary mamerina dia toa tsy manana akory ianao Wifi Nahita aho ary maro ny olona no nanao an'io tamin'ny kara-karatra io. Tsotra be ny vahaolana, hanokatra ny terminal (Control + Alt + T) izahay ary hanoratra ity kaody manaraka ity
Averina indray ary miaraka amin'izany ny wifi dia efa tokony hiasa mahagaga.
Fanamarihana: Nataoko nifandray tamin'ny internet tamin'ny alàlan'ny tariby izany ary nesoriko izy mandra-pamerenako.
Raha tsy mandeha izy dia alao antoka fa ny maodelin'ny karatrao dia ny broadcom 43xx (4311, 4313, sns)
Tokony hiseho zavatra toy ity izy, izay mazoto no maodelinao.
02: 00.0 Controller Network: Broadcom Corporation BCM4313 802.11b / g / n Wireless LAN Controller (rev 01)
Ireto misy vahaolana hafa momba ireto modely manaraka ireto (tsy nanompo anao ny vahaolana voalohany).
Avereno indray avy eo.
Raha ny karatrao dia BCM4312 dia soraty ity
Raha misy an'io ny nomeraon'ny karatrao.
Raha tsy manamboatra ny wifi anao io dia io no vahaolana farany mety indrindra amin'ny ankamaroan'ny Broadcom 43xx
Hanombohana dia tsy maintsy mandeha any amin'ny terminal izahay ary manoratra:
Avy eo izahay dia mampihetsika ny tahiry rehetra, tsy manilika ireo ao amin'ny cd ubuntu. Vantany vao vita izany dia manidy ny varavarankely izahay ary manokatra ny terminal, ary manoratra
hanavao ireo loharano
Manaraka izany dia tsy maintsy mametraka ny loharano kernel ary koa ny lohatenin'ity ho soratantsika:
sudo apt-mahazo mametraka linux-loharano linux-headers-3.5.0-17-generic
Farany afaka mametraka ny mpamily avy amin'ny rindrambaiko-fananana, synaptic na avy amin'ny terminal miaraka amin'ny baiko isika: sudo apt-get install bcmwl-kernel-source
Amin'izay dia tokony handeha ny zava-drehetra 😀
Alohan'ny hamaranana dia avelako ireo loharano:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Amboary ny olana amin'ny Wifi (Broadcom 43xx) amin'ny ubuntu aorian'ny fanavaozana
Ny tsy fametrahana ireo mpamily Wi-Fi an-trano dia ampy, izany no mitranga amiko amin'ny 4313.
Ny zavatra tsara indrindra dia ny mijanona tsy mividy fitaovana indray mandeha, miaraka amin'io karatra Wi-Fi feno bontolo io: /
Misaotra amin'ny fampidirana. Ny tena izy dia isaky ny fanavaozana ny zavatra tsy miasa intsony ary tsy maintsy mitady vahaolana tsy tapaka rehefa tokony ho ny mifanohitra amin'izay no izy.
Raha ny fahitako azy dia toa tsara kokoa noho ny intel ny broadcom Toa hitako fa voafehin'izy ireo tsara kokoa ilay famantarana, fa raha manome olana kely izy ireo, amin'ny Ubuntu raha tsy apetraka ny mpamily na raha tsy ao anaty lisitra mainty dia tsy manomboka ny rafitra. Ny fonosana firmware-b43-installer ihany no apetrako amin'ny tamba-jotra tariby. Mihobia!
zesssez dia hoy izy:
... ny fanavaozana sy ny endriny goavambe ao amin'ny Ubuntu dia efa mahazatra ... ary io puce io ihany koa. Samy amin'ny Linux sy OSX86 dia manome olana ho an'ny mpamily sambatra. Ny tsara indrindra ... mandosira azy na manova distro hehe 😉
Soa ihany fa manana ny olona avy ao amin'ny Desdelinux sy maro hafa izahay mba hanamorana ny raharaha.
Mamaly an'i zesssez
Ahoana no hataontsika ho antsika izay manana karatra tambajotra tsy misy tariby Realtek?
Manao lspci ao amin'ny terminal-ko aho ary izao no vokany:
02: 00.0 Controller tambajotra: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8188CE 802.11b / g / n WiFi Adapter (rev 01)
Misy torohevitra ve?
PS: Mampiasa debian 6 aho, mampiasa ny loharano misy ireo rohy izay manondro ny wheezy.
Salama Elinx, jereo raha mety aminao ity http://perseo.desdelinux.net/blog/2012/09/26/instalar-driver-rtl8188ce-en-ubuntu/ Mirary soa 😀
Manana olana mitovy amin'izany aho, nisy nahavita namaha izany tamin'ny Realtek?
Porky dia hoy izy:
Misaotra betsaka tamin'ny anjara birikinao.
Miaraka amina fampianarana video hitako tao amin'ny youtube no nahafahako namaha ny olako: nametraka ubuntu 12.04 tamin'ny dell aho niaraka tamin'ny broadcom 4311 (damn chingaderas) ary farafaharatsiny hita ny tambajotra tariby, tamin'ny faran'ny fanavaozana na ny tambajotra tariby. hita.
Ny nataoko dia ny nitendry voalohany: sudo apt-get purge bcmwl * (araka ny voalaza tamin'ity fandraisana anjara sarobidy ity. Rehefa namerina aho dia efa hitany ilay tariby fa tsy ilay tariby) dia nomeko fanavaozana sudo apt-get ary avy eo, sudo apt -fidio ny fametrahana firmware-b43-installer (dingana hitako tamin'ny lesona video) ary amin'ny farany dia afaka mamantatra ireo tambajotra tariby sy tsy misy tariby aho.
Valiny amin'i Porky
euclides mosquera dia hoy izy:
Saika nandritra ny alina tontolo aho, namaky fampianarana satria vaovao amin'ny Ubuntu aho, ary ity tutorial ity no namonjy ahy, niaraka tamin'ny kaody voalohany namboarako ny wifi ny karatro dia 4311 misaotra betsaka ary arahaba avy any Kolombia
Mamaly an'i euclides mosquera
Salama maraina, manana olana mitovy amin'izany aho, tsy misy afa-tsy amin'ny karatra intel ho an'ny 3945abg tsy misy taratra dia mamantatra ny tambajotra nefa tsy mifandray, izany rehetra izany dia nitranga tamiko hatramin'ny fanavaozana farany ny Ubuntu 12.10 sy ny fanavaozana ny 13.04. Efa nanandrana ny zavatra hitako tamin'ny internet aho, na dia ny bilaogera sasany mahalala betsaka momba ny linux aza dia nilavo lefona, raha afaka manampy ahy ianao dia tena tiako izany.
javier6723 dia hoy izy:
Misaotra betsaka, vao avy nanavao ny kinalan'ny Ubuntu aho ary nanomboka tamin'izay dia tsy afaka nifandray tamin'ny wifi an'ny tranoko na ny biraoko, nijery ireo forum rehetra aho ary nanandrana ny zava-drehetra, fa izaho no nanao ny zavatra voalohany anao hoy aho dia novahako
Valio ny javier6723
MAHATALANJONA !! SORATRA AZO IZAY MORA!
Nitsidika tranokala maro aho ary izany no hany zavatra niasa ho ahy.
Palacian dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fandraisanao anjara. Saingy ny olako dia manomboka rehefa mampihatra ny torolàlana voalohany aho dia mahazo hafatra hoe "tapaka ny fanatanterahana dpkg ary manatanteraka an-tanana sudo dkpg - configure -a"
Ataoko izany, fampahalalana marobe no mivoaka eo amin'ny efijery ary manantona.
Mamaly an'i Palacian
taotao dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fandraisanao anjara !!
Efa nilavo lefona aho.
Mamaly an'i taotao
Fiainana madio !!! namonjy ahy ianao !!!
Manana olana amin'ny ubuntu 13.04 aho misy tambajotra wifi izay tiako ampifandraisina saingy tsy hitany amin'ny sivana mac ao an-tranoko izany. Manana ny router-ko miaraka amin'ny sivana mac aho saingy tsy misy izany ary manana wifi USB aho. dia tsikaritr'i ubuntu fa tsy hitany ny tambajotra amin'ny windows dia mivoaka ho tambajotra miafina ary amin'ny mac dia antsoina hoe fialan-tsasatra ary nomeko izy ary nomeko tsia tsy hitany.
mahasoa fotsiny ...
Gerardo Kasparov dia hoy izy:
Izay nilaiko fotsiny dia nahazo namana 10 ianao. Misaotra betsaka, andramako izany, heveriko fa tsy hisy fahasamihafana fa ataoko ao amin'ny Pear OS8 (by the way, raha mbola tsy nanandrana ianao dia omeko anao izany!)
Valiny tamin'i Gerardo Kasparov
esteven dia hoy izy:
Salama, manana solosaina hp aho fa tsy mahazo wifi, tsy haiko raha manana ny broadcom izany
Tsy haiko ny manamboatra ny Wi-Fi ary rehefa apetrako ao an-tranoko ny Wi-Fi dia toa nitady ilay tambajotra aho, saingy tsy azoko ilay Wi-Fi, mazava ho azy fa mandeha io ho ahy miaraka amin'ny takelaka misy ahy, fa amin'ny solosaina findainy dia tsy misy mahasarika ahy ny anti-panahy manampy ahy ity ity ny facebook / arbertrojas13
Mamaly an'i esteven
Salama, manana olana aho fa ny karatra tambajotra tsy misy tariby dia encore ary ny wi-fi dia tapaka ary heverina fa tsy misy fifandraisana, mila miverina mamerina indray aho mba hifandray indray amin'ny fotoana hafa tsy maintsy hamafana ny tambajotra aho, hamerina ary hampiditra azy indray ary Rehefa afaka kelikely dia tsy mandeha amin'ny iray amin'ireo voalaza etsy ambony ireo dia voatery nanova ny kinova voalohany tamin'ny 13.04 aho ary teo no nanomboka ny olana dia noheveriko fa tena mavesatra izany ary nidina tany amin'ny Ubuntu 10.04 aho ary mitohy ny olana ary tena tadiaviko raha te hahalala raha manana Làlan-kizorana amin'ity atiny ity ianao dia hiasa miaraka amin'ny karatra tambajotram-pifandraisana tsy misy tariby
Misaotra betsaka!!!! Nanaraka ny dianao tamim-paharetana aho ary nahazo ny wifi ahy indray
Valiny tamin'i Dennis
Miguel Angel Serrano dia hoy izy:
Nanana olana tamin'ny wifi aho rehefa nametraka UBUNTU. Manana HP Compaq nx8220 aho. Tsy mandeha ny bokotra wifi. Tsy vitako ny nanamboatra azy io, raha tsy tao amin'ny forum iray no nanoro hevitra ny olona iray
1 Midira ao amin'ny BIOS
2 Avereno ny toe-javatra voalohany
Te hizara azy aho.
Valiny tamin'i Miguel Ángel Serrano
NcoAr dia hoy izy:
Nanandrana aspiratera 3000 aho niaraka tamin'ny chip 4318 ary tsy nety tamiko izany. Miaraka amin'i Ndiswrapper dia asehony ahy ireo tambajotra misy fa tsy mifandray.
Mamaly an'i NcoAr
Misaotra namana 😀 tena nanampy ahy tamin'ny voalohany io, fa manana fanontaniana aho, fantatrao ve ny antony hitrangan'izany?
Niasa ho ahy izany. Izaho dia efa mahatsapa tsy dia lehibe intsony. Misaotra arivo!
Namonjy ny aiko izany, andro maromaro nanandramako fampahalalana avy amin'ny tranokala hafa mandra-pahitako an'ity sy ny voalohany nifandraisako
Valio ny MeMe
Misaotra namana noho ny fandraisany anjara, nanampy ahy tamin'ny fomba tsara ianao satria ireo no dingana voalohany nataoko tao amin'ny linux ary satria tsy nandeha ny wifi taorian'ny nametrahana ubuntu, dia kivy aho fa izao manohy
Misaotra betsaka amin'ny fanampiana! Tena tsara ho ahy izany….
Toy izany koa no nitranga tamiko, nanova ny w7 ho ubunto 14 aho, tsara daholo, mandra-pahatongako ny hanavao azy io ary tsy mandeha intsony ny wifi. Nanaraka ny dianao aho fa tsy. Hoy izy amiko: tsy maintsy mihazakazaka mampiasa sudo dpkg –c ianao
Duzthin dia hoy izy:
Inona no tianao holazaina amin'ny farany amin'ny fampandehanana ny tahiry rehetra? valio azafady meeeeeee tadiaviko ny solosaina findainy shitty haka wifi: '(
Valiny tamin'i Duzthin
Shaku dia hoy izy:
Nanompo ahy indray! Misaotra betsaka noho ireo kaody, newbie aho, ka napetrako nefa tsy fantatro izay nataon'izy ireo, saingy voavaha izany.
Mamaly an'i Shaku
Gamalier dia hoy izy:
manofahofa tanana. !!! ho an'ny rehetra ..!!! Manomboka amin'ny linux aho
Miezaka ny manamboatra ny olana amin'ny wifi aho
ary menatra aho noho io hadisoana io
E: tapaka ny dpkg, tsy maintsy mihazakazaka ianao "sudo dpkg –configure -a" hanitsiana ny olana
raha misy afaka miteny amiko ny fomba fanamboarana azy
Valiny amin'i Gamalier
Tena nanampy be ahy io, Misaotra !!!
fandraisana anjara lehibe! Manana izany olana izany aho fa… ny karatra ataoko dia Ralink corp. RT3290 Manana ubuntu 12.04 aho
olona afaka manome tanana ahy amin'izany ?? Tiako be io =)
Misaotra ny fandraisana anjara, fanampiana be dia be izy io ary izao dia mifandray amin'ny wi-fi
liona @ liona: ~ $ lspci | grep Wireless
01: 00.0 Controller tambajotra: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
Ny karatra tambajotranoko dia izao no hataoko ???
Eduardo Palacios dia hoy izy:
Salama maraina manana an'ity karatra ity ihany aho,
02: 00.0 Controller tambajotra: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
Toy ny fomba fiasa, tiako ny sainao.
Valiny tamin'i Eduardo Palacios
misaotra fa nanampy ahy tokoa ianao
Jereo ity horonantsary ity….
Gatus3000 dia hoy izy:
Nanavotra ahy ianao, tsy hitako izay hatao rehefa nifindra tamina mpanara-maso tompona aho ary niseho tamiko io olana io, saingy noho ny lahatsoratra dia voavaha tamin'ny voalohany
Valiny ho an'i Gatus3000
D. Dominguez dia hoy izy:
sakaiza misaotra betsaka ... efa teo amin'ny manodidina betsaka tamin'ny firmware an'ny MiniHP 1000 aho ... Soso-kevitra ary voatahiry ao amin'ny tianao indrindra.
Valiny tamin'i D. Dominguez
Akanjo jaky dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao noho ny vaovao, 2 taona lasa izay dia niasa lavorary tamiko io rehefa nametraka UBUNTU 13.04 na 13.12 tsy tadidiko hoe iza, izao rehefa nohavaozina ho 15.04 dia tonga tamiko indray fa tsy nanana wifi aho , Niverina aho nitady an'ity pejy ity ary nanandrana nanao izany aho saingy tsy nety ilay izy, noho izany sendra nahita ireo mpamily tao amin'ny solosainako aho ka hitako io, nosokafako ilay rindranasa sy fanavaozana ny rindranasa, ao amin'ny Ny mpamily fanampiny dia nanisy boaty ho an'ny mpamily Wi-Fi ahy toa tsy nihetsika, ka navadiko fotsiny ary dia izay, efa nanana wifi indray aho.
Manantena aho fa nanampy olona hafa toa ny nanampianao ahy taloha
Valiny tamin'i Joar Robles
TRevice dia hoy izy:
Niasa tamin'ny fisaorana 10 aho
Mamaly an'i TRevice
Wilmar Fajardo dia hoy izy:
Tsy ho tonga tamiko mihitsy io vahaolana io. Nanana olana mitovy amin'izany aho ary noho ity lahatsoratra ity dia afaka namaha azy aho. Misaotra betsaka !!!
Valiny tamin'i Wilmar Fajardo
Diana Rengifo dia hoy izy:
Ampio aho manana probook 4410s ary nametraka ubuntu 15 aho ary izao dia tsy ekeny ny fanampiana bluetooth sy kedo miaraka amin'ny ubuntu ary nizara rivotra fa tsy mandeha io fanampiana azafady tsy azoko atao ny manamboatra azy
Valio i Diana Rengifo
Voavaha io. Tsy maintsy apetrakao ny rindranasa synaptika ary avy eo dia tadiavo ny Driver bcm Raha vantany vao eo amin'ny mpamily ianao dia mankanesa any amin'ny menio Top dia safidio ny kinovan'ny fonosana safidy safidy ary safidio ny kinova tranainy indrindra an'ny mpamily ary apetaho ireo fanovana aorian'ny nametrahana azy dia mila mifidy indray Ny mpamily hiverina any amin'ny kinova fanidiana menio fonosana miaraka aminay dia hisorohana ny mpamily tsy hanavao azy ho azy amin'ny rafitra fiasa ary hampiasa ilay mpamily tranainy indrindra izay tokony hiasa tsy misy olana izahay
Niasa lavorary tamiko izany, antenaiko fa hamafisinareo raha mety aminao
Fiarahabana avy any Honduras!
Mamaly an'i lafat32
Mar1an0 dia hoy izy:
Misaotra, miasa miaraka amina baiko mitambatra aho. Manana WiFi miverina amin'ny inspiron aho. mahafaly
Valiny amin'ny mar1an0
Izy io dia niasa ho an'ny BCM43228. Misaotra anao
Farany zavatra manompo ahy. Misaotra anao..
Dayis dia hoy izy:
Nanompo ahy ho an'ny BCM43228 io.
Atsaharo indray ary tsy mandeha izany. Nandeha tamin'ireto aho:
sudo lozisialy-fananana-gtk & fivoahana
sudo apt-mahazo mametraka linux-headers-generic
sudo apt-mahazo mametraka bcmwl-kernel-loharano
Ary izy irery no nifandray !!
Valiny tamin'i Dayis
Misaotra, tena nilaina izy io, niasa ho ahy tamin'ny RTL8821AE 802.11ac ho an'ny ubuntu
Misaotra anao!!! Nahazo wifi hiasa amin'ny Elementary OS 5.0 Juno.
Oskrki dia hoy izy:
Salama, tsy nety tamiko ity…. na eny fa nisy zavatra tsy nety natao. Avelako fampahafantarana anao sy izay nataoko mba hampahomby azy ...
Manana compaq presario c500 aho ary namelombelona azy tamin'ny SSD. Mampiasako izany ho an'ny ankizy ary nanapa-kevitra ny hametraka xubuntu 18 aho (talohan'ny nananako 10, 12 ary 14). Ao amin'ny andiany faha-10 ny Wi-Fi dia nandeha tsy nisy olana, fa tamin'ny andiany 12 dia nanomboka ny aretin'andoha.
Talohan'ny nametrahako mpamily sasantsasany izay sintomiko tamin'ny Internet ary nandeha ... saingy tsy hitako izy ireo ary nanandrana izany rehetra izany aho fa tsy nisy, mandra-pahatongan'ny ...
Taorian'ny nametrahako ny zava-drehetra dia nankany amin'ny "Rindrambaiko sy fanavaozana" aho ary tao amin'ny takelaka "Drivers Tambahan" dia hita fa nampiasa ireo mpamily Broadcom tompony aho… Tadidiko fa amin'ny kinova hafa an'ny xubuntu dia tsy maintsy nilaza taminy aho mba tsy hampiasa azy ireo…. ary nataoko izany, nasiako «Aza mampiasa ilay fitaovana». Niandry ny hahavitany azy aho ary namerina.
Ankehitriny dia hitako teo amin'ny kisary amin'ilay bara-pifandraisana «Activate Wireless», izay tsy mbola niseho tamiko izy hatramin'izao.
Nihetsika tsy misy tariby aho saingy mbola tsy mandeha…. Nomena aho hanome ny bokotra amin'ny solosaina finday hampiasana wifi (eo akaikin'ny bokotra on / off) ary dia izay. Hitako fa nivadika ho manga ny bokotra (andao handeha, nampirehitra izy ary nahafantatra ny manodidina azy).
Famintinana: nataoko ny dingana rehetra voalaza eto, novonoiko koa ilay fitaovana tamin'ny lozisialy sy ny fanavaozana> mpamily fanampiny, navadiboko ilay boaty "Activate Wireless" ary tsindrio ny bokotra eo amin'ny solosaina finday hampiatoana / hanafoanana wifi.
Manantena aho fa misy manampy.
Valiny tamin'i Oskrki
Tonatiuh L. dia hoy izy:
Lazaiko aminao fa nataoko izany:
sudo apt-mahazo mametraka b43-fwcutter firmware-b43-lpphy-installer bcmwl *
Ary mbola tsy miseho ny olan'ny WiFi….
Mamaly an'i Tonatiuh L.
Nanao fanitsiana aho, nanao:
«Raha ny karatrao dia BCM4312 dia soraty ity
Avy eo avereno indray. »
Misaotra… amin'ny baiko voalohany, mamaha !!!
Tso-drano ho an'ny rehetra
Valiny tamin'i Jose Felix